နှစ်ဆတဖက်သတ်ခဲအပေါ်ယံပိုင်းကာကွယ်ပေးရန်တင်သွင်းပစ္စည်း - တရုတ်ရှန်ဒေါင်း Chen က lu
HD02 ခဲဂျယ်လ် (ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက်အတွက်နှစ်ဆခြမ်း) 1, function ကို: ကအဓိကအားဖြင့် X ကိုရောင်ခြည်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်အသုံးပြုသူများသည်နှင့်အညီနိုင်ပါတယ်လိုအပ်တယ်လို့အဓိကအားဖြင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်မှု, (X, gamma rays, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး) အတွက်အသုံးပြုသည်, အသုံးပြုသူသည်နှင့်အညီရှေးခယျြနိုငျ ကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များ (0.5 MMPB gamma rays ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုယေဘုယျအားရှေးခယျြ) ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုစီးရီးထုတ်ကုန်လိုအပ်ပါတယ်။ 2. ပုံစံ: ရှည်လျားသောလက်နှစ်ဆခြမ်း, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုပိုပြီးပြည့်စုံ၏, 3. ပစ္စည်းများ: အမေရိကန်အကာအကွယ် le ၏ဦးဆောင်ရော်ဘာ 4. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသစ်ကအမျိုးအစားတင်သွင်း ...
HD02 ခဲဂျယ်လ် (ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက်အတွက်နှစ်ဆခြမ်း)
1, function ကို: ကအဓိကအားဖြင့် X ကိုရောင်ခြည်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်အသုံးပြုသူများသည်နှင့်အညီနိုင်ပါတယ်လိုအပ်တယ်လို့အဓိကအားဖြင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်မှု, (X, gamma rays, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး) အတွက်အသုံးပြုသည်, အသုံးပြုသူသည်နှင့်အညီရှေးခယျြနိုငျ ကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များ (0.5 MMPB gamma rays ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုယေဘုယျအားရှေးခယျြ) ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုစီးရီးထုတ်ကုန်လိုအပ်ပါတယ်။
2. ပုံစံ: ရှည်လျားသောလက်နှစ်ဆခြမ်း, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုပိုပြီးပြည့်စုံ၏,
3. ပစ္စည်းများ: အမေရိကန်တင်သွင်းခဲရော်ဘာ
အကာအကွယ်ခဲအရေပြား 4. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသစ်ကအမျိုးအစား, နိုင်ငံတကာဦးဆောင် Ultra-အလင်း, Ultra-ပါးလွှာ, Ultra-ပျော့အကာအကွယ်ပစ္စည်း; သာမန်ခဲအဝတ်အစားနဲ့နှိုင်းယှဉ်, 25 မှ 30 ရာခိုင်နှုန်းခန့်၏ဆွေမျိုးအလေးချိန်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
5. ကောင်းမွန်သောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစွမ်းဆောင်မှု, ဦးဆောင်ဖြန့်ဖြူးအလွန်ယူနီဖောင်းဖြစ်ပါသည်, ခဲနှင့်ညီမျှ၏ပုံမှန်အသုံးပြုမှု attenuate မည်မဟုတ်;
6. 0.35 / 0.5mmPb ခဲညီမျှပေး, အများဆုံးအတိုင်းအတာရန်သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ပေးရန်ဝတ်ဆင်ယဉ်, လွယ်ကူသော-to-စင်ကြယ်သောမျက်နှာပြင်ပစ္စည်းများ;
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကအဓိကထုတ်ကုန်: X-Ray အကာအကွယ်အဝတ်အစားခဲအဝတ်အစား, X-ray အကာအကွယ်အင်္ကျီ, ခဲမျက်မှန်, ခဲပဝါ, ခဲထုပ်, ခဲလက်အိတ်, ခဲလက်အိတ်, gonadal ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ရင်သားကင်ဆာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, လက်ကိုယ်ရံတော်, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလက်နက် , etc
အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ပင်မထုတ်ကုန်: မိုဘိုင်းခဲမျက်နှာပြင်, ခဲမျက်နှာပြင်, အိပ်ရာကုလားကာ, မိုဘိုင်းခဲကုလားကာ, ခဲဖန်နှင့်ဆက်စပ်သောအရန်ရိက္ခာများရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
ဒါဟာအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ပြင်ပအထည်များကသဘာဝရော်ဘာနှင့်အဝါရောင် danpowder ကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းဦးဆောင်ဖြန့်ဖြူးပင်ဖြစ်ပါသည်, ကာကွယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းသောဖြစ်ပါသည်, multi-layer ကိုအသစ်ကအကာအကွယ်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်, အလင်းနှင့်ပြိုကွဲဖို့မလွယ်ကူပါဘူး, ပျော့ပျောင်းသော;
ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးရေးနည်းလမ်း (1) ထို့နောက် 80 KVP အတွက်စမ်းသပ်ပြီးထုတ်ကုန်, 32 စရဖ, X-ray ဓာတ်ပုံ၏အခြေအနေအောက်တွင် 72 focal length, နှင့်ရုပ်ရှင်၏ဓါတ်ပုံများကိုစောင့်ရှောက်မည်, X-ray ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ပြတင်းပေါက်၏အရွယ်အစားသည်မှန်လျှင်, အသီးအနှံကိုဓါတ်ရောင်ခြည်တန်ခိုးကြီးကိုစုပ်ယူ, ပစ္စည်းအထူကဆိုသည်။ မိုက်မဲပုံပေါ်လျှင် (2), ဆိုက်အတွင်းပစ္စည်းများ၏အထူကိုပြောင်းလဲနေသည်။ မှောင်မိုက်အစက်အပြောက်များအစွန်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလျှင် (3), ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်အကာအကွယ်အဝတ်အစားများမမှန်ကန်ကြောင်းအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားသောပြည်တွင်းရေးအကာအကွယ်ပစ္စည်းကိုမှထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ မှောင်မိုက်အစက်အပြောက်၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏရှိလျှင် (4), ထိုသို့သောပေါက်ကိုဖောက်ပေးထားတယ်အဖြစ်အကာအကွယ်အဝတ်အစားများထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းထုတ်လုပ်နေသည်။ ဒါဟာ 5mm ထက်မပိုတဲ့အချင်းနဲ့မှောင်မိုက်အစက်အပြောက်ကိုကာကွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်ကြောင်းလက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားအားဖြင့်သက်သေပြနေသည်။ 5mm ထက်ပိုကြီးတဲ့မှောင်မိုက်အစက်အပြောက်များစွာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်, ဒါမှမဟုတ်အများအပြားအသေးစားနှင့်မှောင်မိုက်အစက်အပြောက်သတိပြုမိရပါမည်ဆိုပါကမှတ်ချက်ပြုရပါမည်။ ရှည်လျားသောအရိပ်လည်းမရှိဆိုပါက (5) ကဦးဆောင်ရော်ဘာအကာအကွယ်အဝတ်အစားများ၏မလျော်ကန်သောသိုလှောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သောဧရိယာအတွက်ကိုချိုးဖျက်စေမည်အကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကုန်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ (1) ဒီထုတ်ကုန်နေရောင်ခြည်ထိတွေ့မရရမယ်, ကွာအပူအရင်းအမြစ်မှနေရာနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုဆေးသုတ်, အက်ဆစ်, အယ်လကာလီ, ကဲ့သို့သောအခြားထုတ်ကုန်များနှင့်အတူဆက်သွယ်ပါလို့မရပါဘူး (2) ဒီထုတ်ကုန်ရေတွင်းတစ်တွင်း-လေဝင်လေထွက်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ခံရကြလိမ့်မည် နှင့်အေးမြပြီးခြောက်သွေ့တဲ့အခန်း။ အပူချိန် 0-30 ဒီဂရီဖြစ်ပြီး, ဆွေမျိုးအပူချိန် 80% ဖြစ်ပါတယ်။ HC06 Anti-ဝတ်ဆင် Single-တဖက်သတ်ခဲအင်္ကျီ: စူပါပျော့ခဲရော်ဘာစတိုင်: တောင်မှခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားခဲအကြောင်းအရာ: 025, 035, 05mmpb; မော်ဒယ်: L ကို, M, S ကို; လျှောက်လွှာများ scope: လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ radiological ရောဂါအတွက်အသုံးပြု။ အသုံးပြုမှုနှစ်ပေါင်း: တိုင်းပြည်အသုံးပြုမှု၏အရှည်သို့မဟုတ်အသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းအတိုင်းထက်အလွန်, 4-5 နှစ်ကတစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလရှိပါတယ်, နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အကာအကွယ်ဝတ်စုံ၏အကာအကွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ နည်းလမ်း Check: အ update ကိုဖျက်သိမ်းရန်ရမယ်, ထိုအက်ကွဲ၏တတိယရှိလျှင်, ထုတ်ကုန်ကိုမသုံးနိုငျသညျ, မျက်စိအင်အားသုံးလေ့လာရေးနှင့်အတူ, အထည်မျက်နှာပြင်ကိုထိသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အပြားလက်ကိုအသုံးပြုပါ။ တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထိုး detector ဓါတ်ရောင်ခြည်ကို attenuation ၏အတိုင်းအတာ detect နိုင်လျှင်ကအကာအကွယ်ထုတ်ကုန်အစားထိုးခံရဖို့လိုအပ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ယခင်: Chen က lu အနည်းငယ်ပစ္စည်းများအကာအကွယ်ခဲဂျာကင်အင်္ကျီဝက် - နှစ်ဆစွပ်အိတ် - စွပ်အိတ်
နောက်တစ်ခု: တင်သွင်းသည့်ပစ္စည်းများများအတွက်အကာအကွယ်ခဲအင်္ကျီ 0.5 ခဲညီမျှနှင့်အတူစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
လည်ပင်းသည်တရုတ်စက်ရုံထောက်ပံ့ရေးအရောင်စိတ်ကြိုက် X-Ray ကာကွယ်သိုင်းရွိုက်ကော်လာ
စိတ်ကြိုက်နယူးဒီဇိုင်းစျေးပေါတဲ့ X ကို Ray ရောင်ခြည်အကာအကွယ်ခဲခါးစညျးရှေ့ဖုံး
စိတ်ကြိုက် X-Ray ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအင်္ကျီကိုပို့ဆောငျ
သွားဘက်ဆိုင်ရာကာကွယ် X-Ray အဝတ်
သွားဘက်ဆိုင်ရာက X-ray ခါးစညျးရှေ့ဖုံးကိုပို့ဆောငျ
ကောင်းမွန်သောစျေးခဲရော်ဘာ X ကို Ray ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဝတ်ရုံအဘယ်သူမျှမအင်္ကျီလက်ခါးစညျးရှေ့ဖုံး
HD13 Intervenient ရောင်ခြည်ကာကွယ်လက်အိတ်
High Quality ခါးစညျးရှေ့ဖုံးကိုပို့ဆောငျ
High Quality အဝတ်အစား Lead
ခါးစညျးရှေ့ဖုံးမှာ X Ray ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုပို့ဆောငျ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Rediation ကာကွယ်ခဲ ခါးစညျးရှေ့ဖုံးထိန်သိမ်း
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ X-Ray ကာကွယ်အဝတ်အထည်
Ovary ကာကွယ် X ကို Ray ခါးစညျးရှေ့ဖုံးကိုပို့ဆောငျ
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး X-ray ခဲခါးစညျးရှေ့ဖုံး
X ကို Ray အဝတ်အစား Lead
X ကို Ray ကာကွယ်ခါးစညျးရှေ့ဖုံး
X ကို Ray ကာကွယ်ခဲခါးစညျးရှေ့ဖုံး
X ကို Ray ကာကွယ်ခဲအင်္ကျီ
X ကို Ray ရောင်ခြည်ခဲအဝတ်အစား
X ကို Ray Shiled ထိန်သိမ်းကာကွယ်ခါးစညျးရှေ့ဖုံးကိုပို့ဆောငျ
X-Ray ရောင်ခြည်အကာအကွယ် X-Ray ခဲရော်ဘာစာရွက်
X-ray Shield ခါးစညျးရှေ့ဖုံးကိုပို့ဆောငျ
Two-တဖက်သတ် sleeveless လိုလားသူနှင့်အတူတင်သွင်းပစ္စည်း ...
စူပါပျော့နှင့် Semi-စွပ်အိတ်ခဲကုတ်အင်္ကျီပျော့ wi ဖြစ်ပါတယ် ...